Semalt - Iyo yekupedzisira SEO kukurudzira
Kukurudzira kwezvinhu kana masevhisi kuburikidza neInternet uchishandisa yako webhusaiti inzira inoshanda yekushambadzira nekuda kwekukurumidza kukurumidza, nzvimbo yekuvhara, uye nyore. Zvakafanana webhusaiti kukurudzira masevhisi anopiwa nekambani yeSemalt SEO. Wese muzvinabhizinesi / muzvinabhizinesi anoenda online anoda kuwana vatengi vakawanda sezvazvinogona uye anoita / yake webhusaiti kukwezva yakawanda traffic sezvinobvira. Semalt nyanzvi dzinogona kubatsira nebasa iri. Kambani yedu inopfuura kungo-SEO-optimization, iguru repasi rose mumunda wekusimudzira webhusaiti.
Chirevo chakashinga kudaro hachisi chikonzero zvachose. Verenga mhinduro dzemutengi pawebsite yedu, tarisa zviitiko chaizvo, uye iwe uchaona kuti chete Semalt anokwanisa kurarama nebasa iri nenzira iri nani. Nekuda kwekushanda kwedu, tinosimudzira mawebhusaiti kunzvimbo yepamusoro mumainjini ekutsvaga uye nekubatsira varidzi vawo kuzvipfumisa. Ehe, pasina tekiniki yekucheka-yekupedzisira, iwe haugone kubudirira, ndosaka Semalt isingamiri ipapo. Isu tiri kuramba tichivandudza nzira dzedu, tichigadzira matekinoroji matsva. Semalt haina vakwikwidzi vakaenzana kana chinangwa chako chiri kubudirira kuburikidza nebudiriro yewebsite - zviite pamwe chete neSemalt.
Kambani yedu inoonekwa nehukuru hwakanyanya hwekunyatsoita hwakagadziriswa nzira dzekutsanangudza webhusaiti. Hazvina musoro kuunza kupokana, isu tinovimba chete pazvinhu zvechokwadi, izvo zvinosimbiswa nemabudiriro mhedzisiro. Kwemakore gumi, takatarisana nematambudziko anotyisa uye tinogara tichiita sarudzo chaiyo. Ihwo hunyanzvi hwekukunda huri muropa rekambani. Semalt timu iboka revashandi vepasi-vepasi nyanzvi. Pakati pavo pane nyanzvi dzeSEO, mamaneja anokwanisa, IT-nyanzvi, vanyori vanyori vekunyora, uye vagadziri.
Kunyangwe iyo inoshanda zvakasiyana-siyana, nhengo yega yega yeboka inoziva mitauro yepasirese uye inonyatsokwanisa mu SEO optimization. Mukati mekugadzira yakarongeka purojekiti, ine ruzivo timu inofungisisa mhando dzese dzeparamende dzinokanganisa kugona kwewebsite. Izvo zvakakosha kuve nekufunga kwakarongeka, sezvo saiti yega yega inopa imwe kesi, saka inoda nzira inoenderana uye nzira yeSEO-optimization.
SEO Kupfupikisa Ongororo
Kutsvaga Injini Optimization (SEO) ndiyo imwe yenzira dzekuwedzera dzakatarwa kutarisisa uye kuzivikanwa kwewebsite. Haisi imwechete nzira, asi seti yakazara yemabasa inovavarira kugadzirisa mamiriro ewebhusaiti yako mune yekutsvaga injini pane zvimwe zvikumbiro. Kunyangwe iyo saiti yakanaka inoda kukwidziridzwa, kana zvisina kudaro, vateereri vepa internet havangazive nezve nekuvapo kwayo. Ichi ndicho chinangwa chekusimudzira kweSEO.
Nhasi, SEO iri kuramba ichiwedzera chinhu chisingabvumirwe. Icho chokwadi ndechekuti, injini dzekutsvaga dziri kuramba dzichiwedzera kuomarara, saka hazvisi nguva dzose kujeka kuti vangani zvikumbiro zvinodiwa kuti uzadze chinyorwa cheinjini yekutsvaga kuti uzvitumire zvakananga kumusoro. Mune mamwe mazwi, injini dzekutsvaga dziri kuwedzera kutarisa maitiro ari kuongororwa nevashanyi vewebsite. Maharaimu anogona kunge asingaverengeki. Iyi ndiyo nguva yechipiri nguva inoshandiswa nemunhu pane webhusaiti uye shanduko kuburikidza nemukati mehukama. Izvo zvine basa zvakare kana mushandisi akagovanisa chinongedzo pane webhusaiti mablogiki, masocial network, uye mamwe mapuratifomu.
Kana ruzivo rwuri pane peji rwapera, mushanyi achavhara izvo. Kana iye mushanyi achiona peji ine yakasimba zvinyorwa zvakarongedzwa nemitsara yakakosha - iye anoizoisiya. Kusarudzwa kwenzira yekusimudzira SEO kunoenderana nechinangwa chayo. Muzhinji, vatengi vanoda kuwedzera kwevashanyi pane webhusaiti yavo zvichikonzera kukura kwemafoni, kuraira, kutengesa. Asi kune vatengi vakadaro, avo vanongoda kuona saiti pane zvinzvimbo zvepamusoro muminjini yekutsvaga vachitsvaga zvimwe zvinangwa zvekumaka. Semalt ine mhinduro dzinoshanda kune imwe neimwe nyaya. Ticha tarisa pamusoro pemakanzuru anobatsira kwazvo pane kukurudzira SEO, se AutoSEO uye FullSEO.
Mashandiro e AutoSEO
Mushandirapamwe we AutoSEO wekusimudzira webhusaiti wave wakazara pakati pevaridzi vesaiti munguva pfupi yapfuura. Mhedzisiro yekupedzisira inofungidzirwa kusimudzira webhusaiti yako kune zvinzvimbo zvepamusoro mune yekutsvaga injini. Iyo ine zvikamu zvinoverengeka zvekumanikidzirwa uye inoitwa mukudyidzana kwakasimba ne Semalt nyanzvi. Nyanzvi dzinotora basa rakakwana kumushandirapamwe uye dzinovimbisa kubudirira. Iko kurongedza webhusaiti kuchachinjawo kuchinjisa kuchinotungamira mukufambira mberi kweinjini yekutsvaga. Kupfupisa basa iri kuuya, tinokwanisa kuratidza zvinotevera AutoSEO mabasa:
Kutanga mushandirapamwe we AutoSEO, iwe unofanirwa kunyoresa pane yedu webhusaiti. Iyo yekuongorora webhusaiti inotanga kushanda, uye iwe unowana yekutanga mushumo pamusoro pezinga renzvimbo yako mune yekutsvaga injini. Maumbirwo ewebhusaiti anoongororwazve zvinoenderana nezvose zviyero zveSEO. Iwe unoramba uchigamuchira mishumo ine ruzivo rwakasiyana, kusanganisira runyorwa rwezvikanganiso zvakaziikanwa. Kupinda kwako muhurongwa kunoramba kuri kushoma, zvikanganiso zvese zvinobviswa neinjiniya yedu yeSEO. Iyo SEO mainjiniya ichasarudzawo akakodzera mazwi. Iyi nhanho inoda kukwidziridza webhusaiti traffic.
Ikozvino zvakakosha kuti usarudze internet zvinongedzo mushe kuti uzvipinze mune zvimwe zvekushandisa online. Izvo zvemawebhusaiti 'zvemukati zvinofanirwa kuve zvakanyanya basa, sekutsvagisa injini kunoziva chete izvo zvine kukosha. Semalt inotarisa pakusarudza zvakakodzera zviwanikwa zvekuwedzera zvinongedzo Zvese zviitiko zvinoitwa nenyanzvi hazvikuvadzi zvachose kune webhusaiti; kunze kwemaneja pachezvake anotarisisa maitiro.
Nhanho inotevera ndeyokuita shanduko dzinodiwa kune webhusaiti. Nyanzvi dzinotungamirirwa neruzivo kubva kumushumo uye FTP (File Transfer Protocol). Shanduko yega yega inobatsira mukubudirira kwekugadzira, saka nhanho iyi inoda ruzivo rwakanyanya mukusimudzirwa kweSEO uye kunyatsoita chokwadi. Semalt anoziva nezvese mazita ekugadzirisa uye kuisa akakosha anodiwa munguva. Mazwi akakosha anoongororwa kuti aenzane nezviri musati maisa application. Kugadziridza kunoramba kuchienda; iwe unoramba uchingori semucherekisi anorekodha zvawanikwa zvakanaka. Kuitisa mushandirapamwe we AutoSEO mukati memwedzi unoda $ 99.
Chii chaunoda kuziva nezve FullSEO
Kubva pamavambo chaipo, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kambani yeFSSEO ndiyo yekuvandudza webhusaiti mukati menguva pfupi pfupi yakamboitika. Mushandirapamwe uyu unopa kwekunze uye kwemukati kunaka kwewebhu webhusaiti. Maitiro acho anosanganisira nhanho dzinoverengeka uko chimwe nechimwe chazvo chinangwa kusimudzira chiyero chewebsite. Mushandirapamwe uri kutariswa nemaneja ane ruzivo, nepo zviito zvichiitwa zvakananga neiye SEO nyanzvi. Iko kushanda kweiyo FullSEO kunosimbiswa nemhedzisiro yekukurumidza nzvimbo yewebhu yepamusoro chinzvimbo mukutsvaga injini. Kunze kwezvo, hazvibvumiri vakwikwidzi vako kuti vaswedere padhuze nepawebhusaiti yako.
Kuburitswa kwemushandirapamwe weYSESEO kunotanga kana uchinge wanyoresa pawebhusaiti yedu. Kunyoresa kupedzisa kunoreva kutanga kwewebsite kuongorora. Chikamu chekutanga ndechekuvandudza kwemukati. Izvo zvinosanganisira kutarisa iyo webhusaiti mamiriro uye nekupa yakadzama rondedzero nemhedzisiro yekuongorora. Kupfuurirazve, SEO-nyanzvi inonyatsoongorora zvese zvikamu zvesaiti uye inosarudza semantic musimboti. Chirevo chinotevera chinoratidza zvese zvakakanganisika zvikanganiso, izvo zvinogadziriswa pakarepo. Kugadziridza kunoramba kuchingofamba. Kuti tiwedzere webhusaiti traffic, tinoda kutora iwo akakodzera mazwi. Mazwi ese akakosha anosarudzwa nekutarisira kukuru, sezvo vachiita basa rakakosha mukusimudzirwa. Nenzira yekuwana iyo FTP, nyanzvi inoita shanduko dzinodiwa pawebsite.
Iyi nhanho yechipiri ndeyekunze optimization. Izvo zvinosanganisira kuisa zvinongedzo mu niche zviwanikwa. Izvo zvakakosha kuti yako yezvinyorwa inoenderana neiyo zviwanikwa. Kana zvabatanidzwa zvangoiswa, webhusaiti yacho inotanga kuwedzera nekukasira. Basa rakakura riri pane edu SEO nyanzvi mune iyo nzira yekusarudza dzakabatana zvibodzwa uye zvakavimbika zviwanikwa. Neraki, Semalt inoshanda pamwe neyakasiyana siyana yakavezwa mawebhusaiti ayo anosangana SEO mazinga. Izvo zvinongedzo zvakaiswa mune aya masayiti zvinobatsira kukurudzira kunobudirira. Chiitiko chako cheshambadziro hachidiwi, asi unogara uchiziva shanduko dzese pawebhusaiti. Mishumo yenguva dzose inokuzivisa iwe nezvekukura kwechikamu cheyero. Zvakare, iwe unogona kubata nyanzvi panguva imwe neimwe uye inoda chero ruzivo rwune chekuita neyako saiti.
Kana, nekuda kwechimwe chikonzero, kusimudzirwa kweSEO kumiswa, hakuzounze matambudziko makuru. Ehe, Google ichabvisa backlinks kubva mudura re data munenge mwedzi, asi masisitendi acharamba ari mune imwe chinzvimbo. Iyi chinzvimbo haina kudonha pazasi chikamu icho chaive usati watanga iyo FullSEO. Kuti uverenge mutengo webasa, unofanirwa kutanga waita sarudzo. Mutengo wekupedzisira unozotemerwa mushure mekunge webhusaiti yako yaongororwa neyedu SEO nyanzvi. Mutengo wacho hauzoratidzika kunge wakanyanya, asi zvinoenderana nemamiriro ewebhusaiti yako. Chero zvazvingaitika, mari yese inobhadhara katatu mutengo.
Mutemo mukuru weSEO optimization ndiyo chaiyo zano. Kana iyo webhusaiti izere nekukanganisa indexing uye ine zvinetso zvehunyanzvi, nzira chete yekubuda ndeyekuunganidza iyo data yekuongororwa. Semalt akagadzira yakasarudzika system yekuwongorora iyo inobvumidza kuti iite inogadzira optimization. Uku ndiko Kuongorora, yakasarudzika yewebhu sosi yekuongororwa system yakanangidzirwa pakuzivisa hunyanzvi kukanganisa uye kugadzirisa kwavo. Matanho ese anotorwa anobatsira mukubudirira kwewebhu webhusaiti. Zvakare, Analytics inopa mukana kune yako yemakwikwi webhusaiti data. Analytics inosanganisira iyo inotevera mabasa:
Analytics haina kungogumira pakuzivisa izvo zvinetso zvinosangana nekusimudzira webhusaiti. Chekutanga pane zvese, inosarudza zvinyorwa zvemukati zvehupfumi uye hunyanzvi hwaro parameter. Inoita nekufananidza kuongorora kwevanokwikwidza mawebhusaiti, inoongorora zvakanaka zvavo uye nezvakakura. Iko kuongororwa kwekutangisa kunotanga mushure mekunyoreswa pane yedu webhusaiti. Chirevo chekutanga chinoratidza chinzvimbo chako pane injini yekutsvaga. Anokwikwidza mawebhusaiti ako anoongororwawo. Saka, zvinoshamisa zvezvimiro zvavo zvinozikanwa kwazvo. Pahwaro hweruzivo urwu, nyanzvi dzinopedza shanduko dzakakodzera, zvichifunga nezve SEO miitiro.
Kana iwe uine akavimbika account, iwe unogona kuwedzera mamwe masosi kune yako pachako kabati. Wese mawebhusaiti akawedzerwa anoongororwa otomatiki, uye iwe unogashira rondedzero yenyaya neakaonekwa data. Iyo yekutsvagisa injini algorithms inoshandurwa zvine simba, saka chete vaongorori vedu vanonyatsoziva maitiro ekushandura webhusaiti kuti ive pamusoro chaimo mune yekutsvaga injini. Nekuunganidza iyo analytical data, zvichave nyore kutsanangura akakodzera mazwi. Analytics inonongedzera iwo mazwi akakosha anoenderana nezviri ewebhusaiti. Panguva ipi neipi, iwe unogona kuwedzera mamwe mazwi kana kubvisa zvisina kukodzera. Maitiro aya achave nemhedzisiro inobatsira pakukura kwewebsite traffic.
Iyo yekuongororwa maitiro anoitwa kutenderera nguva isiri yako kutora chikamu. Iwe unogashira mishumo yechiitiko uye mhedzisiro yezviito zvese. Mhedzisiro yacho inogara ichishamisa, nekuti iwe unoona kubudiswa kwewebsite mune injini yekutsvaga. Unotarisa chinzvimbo chevanokwikwidza, uye Analytics inotora zviito zvinobvumira webhusaiti yako kuvapfuura vese. Ichi ndicho chokwadi chiri pachena, webhusaiti yako ichagara iri nzvimbo yakakwirira. Izvo zviri nyore kwazvo kushandisa iyo Yekushandisa Programming Interface. Ne API, data rese rinobva rangoenzaniswa. Iwe unogara uchiziva izvo zvezvino nyowani, asi usaite kuedza. Iko kune mubhadharo wakagadzwa webasa rekuongorora. Semalt akagadzira inotevera Analytics mapakeji:
Semalt inopawo mazhinji mabasa ebudiriro webhu. Nyanzvi idzi dzinoshandisa nzira dzakasiyana siyana dzekugadzira mawebhusaiti ekushambadzira. Nekudaro, iyo webhusaiti zvikamu zvakavezwa zvakagadzirwa, zvakabatanidzwa neyechitatu-bato kunyorera uye Dhijitari Management System. Iyo hombe yemutengi inodaira inopa yakadai seyakakwira-enda yakakosha e-commerce modules uye APIs.
Vhidhiyo Yekusimudzira naSemalt
Bhizinesi inobudirira chete kana chigadzirwa chayo chichiita kuti ive nemhinduro mukati mevatengi. Vhidhiyo Ad ndeyemhando yakajairwa kwazvo iyo inovimbisa kukurudzira kwakanaka kwezvinhu zvakashambadzirwa uye masevhisi. Vhidhiyo yakadaro inounza yakawanda traffic kune webhusaiti yako, ndosaka Semalt yakatanga Kurudzira Vhidhiyo Kugadzirwa . Vhidhiyo yakagadzirwa nesu inoratidza zvese zvakanaka zvekambani yako. Isu tinopa template yemavhidhiyo sarudzo uye nezvaunoda. Mutengo wesarudzo yechipiri wakasiyana uye wakatemwa mushure mekunge purojekiti yakurukurwa. Vhidhiyo Yekusimudzira inovimbisa budiriro ipapo yebhizimusi rako.
Icho chinyorwa chinoratidza zvakajeka zvakanakira kushanda naSemalt. Muchokwadi, izvo zvakanakira zvakatonyanya kukosha. Hatimbofa takapa zvipikirwa zvisina basa, nekuti poindi yacho haisi kungogonesa webhusaiti. Isu takazvipira kukupfumisai nenzira dzese dziripo. Kubudirira kwako ndiko kubudirira kwedu, saka mukudzise bhizinesi rako neSemalt. Usatambisa nguva yako. Bata nesu ipapo. Tine makiyi ebudiriro yako!